Kiplagat oo Qancinta Ergada ku Mashquulsan.
Ergayga Kenya u qaabilsan soomaaliya bethwel kiplagat ayaa ku hawlan qancinta ergooyinka aan ka qaybgalin furitaankii shirka ee kala ah dowaladda kumeel gaarka iyo kooxda G8.
Maanta ergaygu waxaa uu la kulmay qaar kamid ah G8ka sida Mawliid Macaane , mar aan mawliid la xiriiray waxaa uu iisheegay in isaga beeshiisa lasiiyay 16 xubnood isla markaana uu ku qancay laakiinse waxaa uu ii sheegay in qaybaha kale ee G8ka hadii ayna ka qayb galin mawqifkooda taabacsanyahay.
Kiplagat waxaa kaloo uu lakulmay Xubnaha dawladda kumeel gaarka galabta waxaana uu usoo gudbioyay in ay ka qaybgalaan shirka isagoo haatan kumashquulsan sidii iyagana uu uqancin lahaa.
Cusmaan Xasan cali Caato waxaa uu iigu waramay in isaga uu la kulmi doono kiplagat maalinta Talaadada ,halka Jaaca cali jaamac uu sheegay in wali aan la balamin isagoo horay u gudbiyay qoraal cabasho ah.
dhanka kale waxaa la dhisay gudi isku dhaf ah oo ka kooban Dawladda Kumeel Gaarka iyo G8 ,waxaana wararku ay sheegayaan in maamul loo hagaajiyay gudigaas.